Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » Isikhululo senqwelomoya saseBudapest: Bhabha usuka eBudapest usiya kwisiqithi saseGrisi saseKos ngeWizz Air
Isikhululo senqwelomoya esikhulu kuMbindi Mpuma Yurophu siqinisekisile namhlanje ukuba sizakusungula inkonzo ephindwe kabini ngeveki kwidolophu yasechwebeni eyaziwayo ngobuninzi beelwandle ezinesanti.
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest sibhengeza ukuqhubela phambili kwenethiwekhi yendlela
I-Wizz Air yongeza ikhonkco elitsha kwisiqithi saseGrisi saseKos
I-Wizz Air izakusungula inkonzo ephindwe kabini ngeveki kwidolophu yase-Greek harbor
Kwiiveki nje ezimbalwa kukuvuselelwa kweenkonzo zomoya e Isikhululo senqwelomoya saseBudapestIsango laseHungary libhengeza ukuqhubela phambili kwenethiwekhi yendlela kunye nokongeza ikhonkco elitsha likaWizz Air kwisiqithi saseGrisi iKos. Ukuxhasa ukwandiswa kwakhona kwesiseko sayo sasekhaya, isiphatho esinexabiso eliphantsi (ULCC) iqinisekisile ukuqala konxibelelwano lwamva nje ukusuka nge-16 kaJulayi, kunye nezihlalo ezithengiswayo namhlanje.
Esona sikhululo senqwelomoya esikhulu eMpuma Yurophu siqinisekisile namhlanje ukuba sizakube sisungula inkonzo yeeveki ezimbini (ngeMivulo nangooLwezihlanu) kwidolophu eselunxwemeni eyaziwa ngobuninzi beelwandle ezinesanti. Indawo entsha kwisikhululo seenqwelomoya nakwinqwelomoya, Wizz Air Akujongani nokhuphiswano ngqo kwindlela, kusungulwa i-11 yeBudapestth ikhonkco eGrisi njengoko uKos ejoyina iAthene, iChania, iCorfu, iHeraklion, iMykonos, iPreveza, iRhodes, iSantorini, iTesaloniki neZakynthos.
“Isibhengezo sikaWizz Air siyakusidibanisa nendawo emhlophe kwimephu yendlela yethu, singakhange sisisebenze esi siqithi sihle ngaphambili. Siyavuya kakhulu ukuba inqwelo-moya isikhethe ukuba sibe phakathi kwezikhululo zeenqwelo moya zokuqala eziza kuqhagamshela eKos, utshilo uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, iBudapest Airport. “Ngelixa sibona ukuphinda-phinda kweenkonzo kwiinkonzo zethu zenethiwekhi, kuyachulumancisa ngokufanayo ukuqinisekisa iindawo ezintsha nezinomtsalane zokuphucula unxibelelwano lwethu kwezi nyanga zizayo. Sisebenza nzima ukutyebisa abakhweli bethu kwaye sikwazi ukubandakanya esinye isiqithi esidumileyo saseGrisi ngexesha lasehlotyeni yinto esisikhuthazayo kwishedyuli yethu, ”yongeza iBogáts.
35 imiz edlule
18 imiz edlule